Hita amin’ny vola mantsy, hatramin’ny vola sandoka izay ampiasain’izy ireny ny soratra fa “helohin’ny lalana
mandra-pahafaty ny fanaovana vola sandoka”. Renim-pianakaviana iray, efa mananika ny 53 taona, no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny CSP3 Antaninandro teny amin’ny faritra Andravoahangy ny
alarobia 25 septambra teo noho ny fampiasana vola sandoka. Tokony ho tamin’ny 6 ora hariva no nividy entana tamina mpivarotra enta-madinika izy, tsikaritr’ity farany fa sandoka ilay vola 20.000 ariary natolony. Niantso polisy avy hatrany izy, ka nosamborina avy hatrany ilay vehivavy nanome vola sandoka. Nahazo vahana ity asa ratsy ity tato ho ato. Miandahy miambavy ny mpanatanteraka ny fampiasana vola hosoka. Mitaky fahamalinana hatrany izany. Fomba fiadin’izy ireo ihany koa no miaraka maromaro ary manatona mpivarotra izay hitany fa sahirana irery mandray olona ka mividy zavatra izy ireo na manakalo vola. Amin’ny andro hariva, somambisamby efa miha maizina nefa tsy mbola mampiasa jiro toy izao no fanatanterahan’ireo mpanao trafika ana vola sandoka ny asa ratsiny. Miasa fatratra ny polisin’Antaninandro, tsy vitsy koa ireo olon-dratsy tratra tamin’iny faritra Andravoahangy iny.